Taariikhda My Butros » Hiwaayadaha Animal-Friendly u Lammaanayaasha
Hiwaayadaha Animal-Friendly u Lammaanayaasha
Last updated: Jan. 16 2021 | 3 min akhri
Aad Lucky - aad hesho qof cajiib ah oo la wadaaga jacaylka movies aad, waxay leedahay dareen weyn oo kaftan, iyo macaa xoolaha. Haddii aad qulqulaya ka fikrado habeenkii taariikhda oo sahamiyey kulan kasta oo ka taataabtay, sababta aan koraan qaar philanthropy sida laba qof oo, gaar ahaan haddii ay ku daraan hiwaayadaha aad mar hore ku naaloonaysay? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha ku saabsan siyaabaha aad ku caawin kartaa, dhan la taageero wehelkaaga:
1.) Sawir: hoyga hareerayn iyo samatabbixin marar badan u baahan tahay caawimo sawiro tayo Qabsashada xoolaha ay hadda diyaar u ah ansaxinta. Ma adiga ama lammaanahaada Master of Instagram, mise waxa aad jeceshihiin inay sharaxaad ka timid ama ka tagtay of Ibraahim? Tani waxay noqon kartaa taam weyn idiin, oo si fudud u dhalin karaan isbeddel in tirada xoolaha la ansixiyay. La xiriir hoy si loo arko haddii aad ka bixin karto adeegyada aad, iyo wadaagaan kuwa Wajigooda cute on baraha bulshada si ay uga caawiyaan heli guryaha.
2.) Nadiifinta: Jirran ee aruuray ka? Waa sidaas u fudud in ay isku uruursadaan wax aad u badan sida laba qof oo, si ka faa'ideystan fursadan si aad u nadiifiso guriga iyo in la siiyo waxyaabaha loo baahan yahay in ay hoy hoose iyo samatabbixin. Tuwaallada, bustayaal, Wargeysyada, suxuunta, placemats, iyo ka badan oo dhan caddayn karaan waxtar leh in kooxahan. Sii call a, oo bal arag waxa ay u baahan yihiin. Waxaad iyaga ku caawin doonaa sahay halka samaynta gurigaaga habaysan.
3.) Karinta: Goynta baxay hadhuudhka ah iyo / ama xayawaan waxyaabaha wada filanayaa karaa ilaa aad cunto. Jay-Z Beyonce iyo u sameeyey, sidaa awgeed ha? Midebkooda iyo khudrada qaadataa on suxuunta aad jeceshahay ka dhigi kartaa habeenkii pizza fog u xiiso badan, iyo hab nololeed waxaa ku qoran si ay dhadhan, Kuliyadda cusub iyo adventures makhaayad. Samee xoolaha, caafimaadkaaga, ama in lagu kordhiyo wax soo saarka badan casho aad. Si kastaba ha ahaatee, waa faa'iido - iyo dhadhan!
4.) Travel: Ma labada aad jacayl wadada garaacid? Ma safraya liiska waxyaabaha ay rabaan in aad, laakiin marna ma u muuqdaan kuwo si ay u dhici? hoyga iyo samatabbixin badan ayaa u baahan gaadiidka inta u dhaxaysa goobaha iyo samatabbixin kale ama guryaha foster. Haddii aad ka baxday magaalada si kasta, ama haddii mar walba rabay in aad aragto qayb kale oo ka mid ah gobolka, bixiyaan si ay u qaado xayawaan, xitaa haddii ay kaliya qayb ka mid ah habka.
5.) Fanan iyo farshaxan: Haddii aad labada dhici mashaariicda DIY jeclahay (dareenka dhan ku caashaqay Pinterest iyo guys qalab,) ka dibna this waa mashruuc xiiso aad ah. Iyada oo ah alaabta yar iyo qaar ka mid ah wada shaqaynta, waxaad si fudud u dhisi kartaa hoyga cimilada qabow ama guryo eey xoolaha wiifto ah ee bulshada. Tani waxay sidoo kale waa tijaabo weyn u xiriirada, badan sida Ikea iibsadaan. Haddii aad labada jecel fanka, gogo 'qaar ka mid ah loo abuuro wada oo iyaga ku deeqaan si aan macaash xayawaan inuu xaraasho ama isticmaalaan si ay kor ugu qaadaan wacyiga.
6.) Computers: Haddii aad tahay farsmada-bixio, dalab si ay u caawiyaan badbaadiyo ama hoy la design webpage ama baraha bulshada. Haddii aad blog, qoraan qaar ka mid articles oo ku saabsan khayraadka bulshada kuwaas, ama ka caawiyo inay u sameeyaan blogs ee iyaga u gaar ah.
7.) Dhexgalka bulshada: Waxaan ka shaqeeya guryaha xanaanada ee Kentucky, oo waxaan idiin xaqiijin karaa in dadka badankiisu ma heli martida badan. Haddii aad leedahay xawayaan in uu leeyahay shakhsiyad saxda ah ee line this shaqada, hadal group therapy xayawaan aad u bilowdo hawsha dhaco xayawaankaaga diyaar u tabarucid. Dhamaanteen waan ognahay sida qabow dhexgalka xoolaha waa, sidaas sababta aan bixiyaan in qof u baahan raaxada? Tixgeli bixiya adeegyada si hoy rabshadaha qoyska, kids foster, iyo bukaanada hospice, aad. Ha u malaynina bisadaha iyo eyda oo kaliya shaqada ku samayn kartaa, midkood! Waxaan arkay Bakeyle, doofaarka, iyo xitaa diinka oo dhan samaynta qayb!
8.) Sports: Haddii aad iyo aad sweetheart jecel firfircooni, tixgelin abaabulka iyo ka qayb 5K ah si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan gaysto, ama bixiyaan si ay u socdaan eeyaha at dhacdo ansaxinta maxalliga ah. Waxaa laga yaabaa in xataa marti ah eey yar "tartanka" ama carabiyo Superbowl in ay ka faa'iideystaan ​​xaafaddaada Humane Society. Waxaad ku caawin doonaa hay'adaha samafalka ah ee dadaalka ay halka haysta madadaalo, iyo in ay ka-badisay badisay.
9.) Joogista: Hoyga Our xayawaanka waxaa ka buuxa eyda iyo bisadaha in weligeedba way u baahan tahay guryaha, iyo kooxaha samatabbixinta si deg deg ah u baahan dhalinaysaa xoolaha, kuwaas oo si looga hortago UCID. Haddii aad tahay homebody ah oo ay leeyihiin boos dheeraad ah in la kobciyo xayawaan ku meel gaar ah, la xiriir hoyga xoolaha ee maxalliga ah iyo kooxaha samatabbixinta. Maxaa ka fiican tahay badbaadinta nolosha a iyo helitaanka inay ku ciyaaraan saaxiib cusub feeri?
Ku raaxayso, kuwaas oo hiwaayadaha qabeen ah sida laba qof oo, ogaadana in wada aad ka bedelayo nolosha xoolaha aad ku xeeran.